dadka dawac , iyo masakin dagaalki
[[File:HoCMT.png|thumb|right|400px|Ho Chi Minh magaaloyiinka Waxaa jira aragtiyo dhowr ah oo ku tartamaya iskahorimaadka, qaar ka mid ah Waqooyiga Vietnam iyo Jabhadda Xoreynta Qaranka oo aragtay halganka ka dhanka ah ciidamada Mareykanka sida dagaal gumeysi iyo sii wadista Dagaalkii ugu horreeyay ee Indochina oo ka dhan ah ciidamada Faransiiska iyo kadibna Maraykanka ] gaar ahaan nalka shantii sanno ee 1954 ee ku guul-darraystay Geneva ayaa ku baaqay doorashooyin. Tarjumaadaha kale ee waqooyiga wietiga waqooyiga waxaa ka mid ah in ay u fiirsadaan sidii dagaal sokeeye gaar ahaan marxaladaha hore iyo kan dambe ee ka dambeeya U.S isku duubnaanta inta u dhaxaysa 1965 iyo 1970  iyo sidoo kale dagaal xor ah  Aragtida Dowladda Federaalka Ku-meel-gaarka ah ee Jamhuuriyadda Koonfureed ee Vietnam, guushii Việt Cộng ayaa qayb ka ahayd isbeddel bulsho oo isbeddel ah oo ka dhacay WW2 Post-ka, waxayna markii hore u aragtay dagaal dagaal oo ay taageerto Hanoi. ]  Kooxda taageera ee Koonfurta ee Vietnam waxay u aragtay inay tahay dagaal sokeeye, dagaal difaac ah oo ka dhan ah wada-xaajoodka   ama waxay dhiirrigeliyeen in ay u dagaallamaan si ay u difaacaan guryahooda iyo qoysaskooda. Dawladda Maraykanku waxay ku tiirsaneyd sida ay uga qayb qaadatay dagaalka si ay uga hortagto qaadhaan-dhaqameedka Koonfurta Vietnam. Tani waxay qayb ka ahayd aragtida domino ee siyaasad xoojin ah, iyada oo ujeedada la sheegay in la joojiyo faafitaanka wada-xaajoodka.  Laga bilaabo 1950, la-taliyayaal milatari oo Mareykan ah ayaa yimid wixii ka dambeeyay Faransiis Indochina.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dagaalki_Vietnam&oldid=210030"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 2 Maarso 2021, marka ee eheed 17:19.